Indlu yaseNtabeni iBruno-iNdlu yeeNtabeni iBruno
Indawo entle ebekwe kwiPiano di Bovegno hamlet (ephakamileyo iVal Trompia). Ilungele ukuhamba ehlotyeni okanye ebusika ngenxa yeentlambo ezininzi ezisecaleni. Indawo ye-ski ye-Maniva Sky kukumgama omfutshane. Ifikeleleka lula kumachibi aseGarda, eIseo nase-Idro. KWIINTSAPHO EZINKULU EZONGEZIWEYO NGENYANGA.
Le ndlu ikumgangatho wokuqala kwi-condominium, iyindlu enamagumbi amathathu, inamagumbi okulala amabini, igumbi lokuhlambela elineshawa kunye nekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, igumbi lokuhlala elinomabonakude kunye nebhedi yesofa yobukhulu bukakumkanikazi, indawo yokuhlamba impahla, ipaseji, iveranda.
Kufuphi kuzo zonke iinkonzo ezinje ngegrosari, ibhula, ikhemesti, indawo yokwenza iinwele, indawo yokuhlamba impahla, ibala lokudlala, inkundla yentenetya, iibhari kunye neendawo zokutyela. Ilungele iintsapho, abantu abatsha, abantu abadala, abatyibilizi kunye nabadlali bezemidlalo.
Imigama: 35 km ukusuka Brescia / 12 km Maniva pass / 15 km Bagolino (Gaver) / 16 km Gardone VT / 34 km Lake Iseo / 40 km Lake Idro / 50 Km Lake Garda.
Le ndlu ikumgangatho wokuqala kwi-condominium, iyindlu enamagumbi amathathu, inamagumbi okulala amabini, igumbi lokuhlambela elineshawa kunye nekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, igumbi lokuhlala elinomabonakude kunye nebhedi yesofa isiqingatha sesikwere, igumbi lokuhlamba impahla, iveranda.
Kufuphi kuzo zonke iinkonzo ezinje ngegrosari, ibhula, ikhemesti, indawo yokwenza iinwele, indawo yokuhlamba impahla, ibala lokudlala, inkundla yentenetya, iibhari kunye neendawo zokutyela. Ilungele iintsapho, abantu abatsha, abadala, abatyibilizi kunye nabadlali bezemidlalo.
Imigama: 35 km ukusuka Brescia / 12 km Passo Maniva / 15 km Bagolino (Gaver) / 16 km Gardone VT / 34 km Lake Iseo / 40 km Lake Idro / 50 km Lake Garda
Indawo yeentaba ezolileyo kakhulu.
I-Bovegno inelifa lembali elibalulekileyo lolwakhiwo lwexesha eliphakathi kunye nobungqina obubonakalayo, obubekwe ngaphezu kwazo zonke kwiziko lembali. Okubaluleke kakhulu iinqaba zamatye ezithe, kunye neentsalela zenqaba, zakha inkqubo yokukhusela ecacileyo; iifama zemveli ezinamachaphaza amathambeka kunye neentlambo nazo zintle. Ukusuka kwi-hamlet yaseGraticelle, eyaziwayo ngenxa yokuba nge-17 kaJanuwari kukho umnyhadala odlamkileyo onikezelwe eSant'Antonio Abate, uqhubeka kwicala lePrati Magri ungakhetha uhambo oluhlukeneyo oludibanisa kwiindlela ze-CAI (336 ukusuka ePrati Magri di Bovegno ukuya Dosso Rotondo and 335B ukusuka Bovegno ukuya Monte Campione) ukudibana farmhouses kunye namadlelo ezintabeni ungabona iimbono ezintle asezintlanjeni kwicala kunye Pre-Alps, okanye encotsheni yentaba Muffetto apho apho ukuzolula panorama ukusuka Orobie kwiintaba Presolana.
Kwakhona evela Dam Magri, ukuthatha indlela ukungcola ngqo ezindaweni Sant'Andrea kunye Zerma nje phambi kokuba yokusabela, ufikelele kwiifama ezahlukeneyo: abathile ezikhethekileyo inkomo yobisi yebhokhwe yemveliso, abanye nokulima kweziphilayo imifuno amayeza kunye enuka kamnandi, nesafron kunye iziqhamo ezincinci.
*Ndwendwela kwiziko lembali laseCastello naseLudizzo
* Ukutyelela kunye nemisebenzi kwi-Graticelle Dairy
*Ndwendwela iifama zaseChichimela, iAlpe di Zerma neZerma
* Uhambo kwi-Graticelle Valley, Meola Valley, Prati Magri kunye neSavenone
*Ndwendwela kwiCawe yaseSan Lorenzo di Irma.
I-Bovegno inembali ebalulekileyo yelifa lemveli ye-Middle Ages kunye nobungqina obumangalisayo, obubekwe ikakhulu kwiziko lembali. Kwakhona kubaluleke kakhulu iinqaba zamatye ezithi, kunye neentsalela zenqaba, zenze inkqubo yokukhusela ecacileyo; izindlu zeefama zemveli ezichokoza amathambeka kunye neentlambo nazo zintle. Ukusuka kwi-hamlet yaseGraticelle, eyaziwayo ngenxa yokuba nge-17 kaJanuwari kukho umnyhadala odlamkileyo onikezelwe eSant'Antonio Abate, uqhubeleka usiya ePrati Magri ungakhetha uhambo olwahlukeneyo oludityaniswe neendlela ze-CAI (336 ukusuka ePrati Magri di Bovegno ukuya eDosso Rotondo kunye ne-335B ukusuka eBovegno ukuya eMonte Campione) intlanganiso yeefama kunye namadlelo entaba apho ukuncoma iimbono ezintle zeentlambo ezisecaleni kunye ne-Pre-Alps, okanye encotsheni yeNtaba yeMuffetto apho imbono isuka kwi-Orobie ukuya kwiintaba zePresolana.
Kwakhona ukusuka kwiPrati Magri, uthatha indlela engagangathwanga ukuya eSant'Andrea naseZerma ngaphambi nje kokuba indawo yokusabela, ufikelela kwiifama ezininzi: ezinye zikhethekileyo kwimveliso yobisi lwenkomo kunye nobisi lwebhokhwe, ezinye kulimo lwendalo lwezityalo zonyango kunye nevumba elimnandi, isafron kunye nobisi lwebhokhwe. iziqhamo ezincinci.
* Ukutyelela kunye nemisebenzi kwideri yaseGraticelle
*Ndwendwela iifama zaseChichimela, Alpe di Zerma kunye neZerma
* Uhambo oluya eValle di Graticelle, eValle della Meola, ePrati Magri naseSavenone
*Ndwendwela kwiCawe yaseSan Lorenzo di Irma